Oromo | Minnesota Vote by Mail
Sagalee keessan kan bara 2020 karaa mana postaa kennuu danda’u keessaniif baga gammadani!
Sagaleen fillannaa keesanii Minnesota keessatti akka dhagahamu gochuu kessaniif galtoomaa!
Poostaandhaan sagalee kennuun maal jechuudha?
Utuu manaa bahuun hin barbaachisin manuma ofii taa’anii karaa mana postaa sagalee ofii erguudha. Kana gochuuf garuu jalqaba iyyata galfachuun barbaachisaa dha.
Maaliif karaa mana poostaa sagalee kennuu akkan barbaadu sababii dhiheesuun qabaa?
Waawuu hin barbaachisu, Minnesota kessatti sagalee kannuu dhaaf mirga kan qaban hundinuu mana poostaa dhaan sagalee kennuu akka barbaadan gafachuu danda’u.
Maalifana karaa mana poostaa sagalee erguudhaaf gaafadha
Yeroo amma keessa sababii dhukuba dadarbaatiif haalli jiruu gaarii akka hin taane beekamaadha. Bakka garaa garaa yeroo adeemnu, harka keenya dhiqachuu kana kana fakkaataniin of eegachuu akkamu qabnu bakka sagalee keenya kennuu demnutis akka dhukubaaf akka hin saaxilamnetti haala namooni mana isaanii ta’anii sagalee kennuu akka danda’anitti haala mijeesuun barbaachiisaa waan ta’eefi.
Tarii yaadakoo geedaree gaafa filannaa achuma dhaqee sagalee koo kennuu yoon barbaadewoo?
Hamma karaa mana poostaa sagalee kee waraqaadhaan hin erginitti bakkuma sagaleen itti kennamu dhaquudhaa in dandeessa.
Sagaleen koo lakaa’aamuu isaa mirkaneefachuuf maal gochuu naaf ta’a?
Waaraqaa sagalee kee kennudhaaf sii ergame waliin waraqaan kan dhufu jira, isa sirritti dubbisi
Waraqaa sagalee kee irratti kennitu irratti “dhuga baatota” ykn “witness” ka jedhu jiraachuu danda’a. Garuu sababa COVID-19 filmaata isa ammaa kanaaf, Hagayya 11, 2020; hin barbaachisu. Garuu sagalee kennudhaaf kanaa dura hin galmefamne yoo ta’e “dhuga baatuun” barbaachisaadha nama seraan biyya kana keessa jiraatu ta’uu mirkaneesuuf.
Erga waraqaa sagaleen irratti kennamu “ballot” fi unka ergame akkuma guuteen yeroom sana Hagayya 11, 2020 dura mana poostaa galchuu qabda.
Maaliif waraqaa sagalee itti kanamu “ballot” gaffachuun barbaachisaa ta’e utuu waraqaa ittin galmaa’an hin gaaftan?
Lachani iyyuu “ballot” waliin waan dhufuufidah.
Gaaffii waraqaa sagaleen irratti kennamu ani dhihesseen warri dubbin isaa ilaalatu maal godhu?
Gaaffii dhihaatu kana “Secretary of State.” Ykn wajjira dhimmi isaa ilaalatutti erginee guyyaa 5 giddutti naga’ee isiniif ergina.
Waraqaan itti sagalee koo kun yoom naqqaqaba?
Fillannaan gaggeefamuu guyyaa 46 dura.
Waraqaan kun qaqqabuu isaa fi sagaleen keennu lakaa’amuu isaa akkamin hordoffuu danda’a?
Karaa website “Secretary of State” hordofuu dandeessu.
Gaaffii kan biraa yoon qabaadhe eenyuun gaafadha?
Gaaffii keessan gammachuudhaan dhagahuu feena. Karaa armaan gaddii nuu barreessaa – info@mnvotebymail.org.